Lakandranon' i Môzambika - Wikipedia
Lakandranon' i Môzambika
(tonga teto avy amin'ny Lakandranon'i Môzambika)
Ny Lakandranon' i Mozambika dia sampan' ny Ranomasimbe Indiana mampisaraka an' i Madagasikara amin' i Afrika, tandrify indrindra an' i Mozambika.
Ny lakandranon' i Môzambika
Manodidina ny 1 600 km eo ho eo ny lavany, 419 km ny sakany amin' ny toerana tery indrindra ary mahatratra 3 292 m ny halaliny amin' ny toerana lalina indrindra, eo amin' ny 230 km miala ny morontsirak' i Môzambikana. Mandalo amin' ny korian-drano mafana mitodika mianatsimo izay mikambana amin' ny korianan' i Agulhas any atsinanan' ny morontsirak' i Afrika Atsimo.
Any avaratra, eo anelanelan' i Madagasikara sy ny kôntinenta afrikana no misy ny tamba-nosy Kômôro.
Ao ihany koa ireo nosy kely - ankoatra ny nosy Tromelin izay mitokana any amin' ny Ranomasimbe Indiana - izay eo ambany fiadidian' i Frantsa ka antsoina hoe "Nosy Miparitaka": ny nosy Glorieuses, Juan de Nova, Europa ary Bassas da India.
Ny tombon-tsoa azo avy aminyHanova
Ahitana ireo toerana fitiliana ny toetr'andro sy ny fiavian' ny rivodoza ireo nosy kely miparitaka ao amin' io lakandrano io. Maro ireo sambo mpitatitra solitany no mandalo ao. Mahamora ny fiarovana ny fitaterana an-dranomasina sy ana habakabaka iraisam-pirenena ihany koa ao, indrindra ny fifamoivoizana Madagasikara-Jiboty-Madagasikara, na Maorisy-Kenia-Maorisy.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Lakandranon%27_i_Môzambika&oldid=1044471"
Dernière modification le 1 Aprily 2022, à 12:57
Voaova farany tamin'ny 1 Aprily 2022 amin'ny 12:57 ity pejy ity.